Wasiirada Haweenka oo dooneysa in si shaqsiyan ah ula wareegto Guriga Hooyooinka Soomaaliyeed – Somali Top News
Wasiirada Haweenka oo dooneysa in si shaqsiyan ah ula wareegto Guriga Hooyooinka Soomaaliyeed
March 4, 2019 March 4, 2019 Somali Top News	0 Comments
Batuullo Gabelle oo ah gudodomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya ayaa maanta warbaahinta u sheegtay in wasiirka haweenka ay damacsan tahay sidii ay ula wareegi laheed guriga hooyooyinka oo ka agdhow madaxtooyada soomaaliya.
Marwo Batuula ayaa tiri “Gabadha wasiirka Haweenka ah, waxay igu tiri 5, 000 oo dollar ayaan Mushaar kaaga dhigayaa ee guriga Hooyooyinka igu wareeji aan maqaayad ka dhigtee, Haweenka buuqayana iska dhaaf”.
Iyada oo hadalkeeda sii wadata ayay sheegtay heerka musuqa Soomaaliya uu gaariisan yahay ay tahay mid xad dhaaf ah.
” Musuq-maamuqa ayaa halkaas gaaray, miyey wasiiradaas Ra’iisul wasaaruhu ogeyn ayey hadalkeeda raacisay” ayay hadalkeeda ku soo gaba gabeeysay.
Waxa ay sheegtay in mar ay kulan la qaadatay wasiirka wasaaradda haweenka ay uso jeedisay in bil kasta mushaar 5,000 oo doolar ah qaadato haweenka ay hogaanka utahayna kasoo dhexbaxdo si ururka l magaciisa meesha looga saaro .
Waxaa ay sidoo kale sheegtay in ay muhiim tahay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay wax ka qabato Musuq maasuqa ay waddo Wasiirka Haweenka Xukuumadda Soomaaliya.
Arintan ayaa salka ku heysa xilli maanta ururka haweenka qaranka ay ka soo horjeesten shir weynaha haweenka soomaaliya oo wasaradda soo qabnqaabisey kaasi oo muqdisho ka furmaya.
← Soomaalida ku nool Sweden oo loo diiday iney lacag u soo diraan Soomaaliya
Haweenka Soomaaliyeed uma baahna Wasiirad danaheeda ka shaqeysata →
Markab Uu Lahaa Madaxweynihii Hore Ee Ciraaq Oo La Xaraashayo
Al shabaab iyo ciidanka Jabuuti oo ku dagaalamay gobalka Shabeelaha Dhexe
January 27, 2019 January 27, 2019 Somali Top News 0
Deg Deg: Qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Gaalkacyo
May 17, 2020 May 17, 2020 Somali Top News 0